IAlfama Delight River&Imbonakalo zeSixeko AC 3Bedrs+2Baths
ENTSHA! I-Alfama: entliziyweni yeyona ndawo yokwenyani, entle kunye neqhelekileyo yeLisbon ungayifumana le ndawo intle, iqaqambileyo, inkulu kwaye inelanga eneflethi enomlambo ongalibalekiyo kunye neembono zesiXeko seMbali! Intle kwaye iphucukile yomgangatho wokuqala wendlu enamagumbi okulala ama-3 kunye neendawo zokuhlambela ezi-2. Kuthuleke kakhulu, kubanzi, kubekwe ngokucwangcisiweyo kwaye kumgama wokuhamba ukusuka kwiindawo eziphambili zeLisbon. Le yeyona ndawo ifanelekileyo yokuhlala kwakho! Inkonzo yokudlulisa isikhululo seenqwelomoya saseLisbon siyafumaneka
Iibhalkhoni kunye neefestile ezinkulu eziya emlanjeni kunye nesixeko esiyimbali sinika le ndlu ukukhanya okukhethekileyo kunye nomtsalane. Usuka kweli gumbi liphangaleleyo nelihonjisiweyo langoku ungabuka umlambo iTagus, ichweba lawo elihle kunye nesixeko esiyimbali esimangalisayo. Akukho magama achaza imbonakalo yegolide yelanga emanzini kunye nezikhephe ezidlulayo kumgama nje weemitha ezimbalwa ukusuka kuwe, umtsalane wophahla lweAlfama kunye nezikhumbuzo, phumla nje ngelixa usonwabela bonke ubuqaqawuli obukungqongileyo.
Le ndlu ibekwe ngaphakathi kweLisbon yee-nooks ezifihliweyo, iikona kunye nezitrato ezimxinwa apho apha naphaya unokuva isandi seFado, apho ukujonga indawo kufanelekile yonke ipeni yohambo lwakho. Ukuba ngummelwane ogcwele amabhotwe, iicawe, iimyuziyam, iivenkile zakudala, iigalari zobugcisa, iimbono kunye nezitiya, kwangaxeshanye, kukho ukuphazamiseka kwendawo ezele bubomi namandla kwaye isefashonini. Zilahlekele phakathi kweemyuziyam, iivenkile ezintle, iindawo zokutyela ezimangalisayo, imivalo, iiterraces, nisele isiselo kwenye yee-terraces cafes, nive umphefumlo wendawo, konke oku kumgama nje osuka ekhaya!
Ndijonge phambili ukukwamkela eLisbon!
Ngokuqinisekileyo iAlfama yeyona mbali idumileyo, inomtsalane kunye nenxalenye eqhelekileyo yeLisbon. Le ndlu ikwindawo endala yaseLisbon kunye neyesibini indala eYurophu isasazeka kwithambeka eliphakathi kweSão Jorge Castle kunye nomlambo iTagus. Isithili sinenkangeleko eyohlukileyo, ebukekayo kwaye siyindawo enqabileyo yezitrato ezigobileyo, iindledlana ezimxinwa kunye nezitrato ezijikajikayo kunye nezinyuko.Apha unokufumana iindawo zokujonga ezingalibalekiyo, izikhumbuzo ezininzi, iicawe, izakhiwo ezinemibala yemveli, kunye nemivalo encinci kunye neendawo zokutyela ezimangalisayo Umculo weFado unokuviwa rhoqo ngorhatya.
Akunakwenzeka ukuba ube namava okwenyani eLisbon ngaphandle kokuphonononga iAlfama, ethathwa njengentliziyo yesixeko.
Izimvo eziyi-3 032
Sithanda ukwamkela iindwendwe zethu ngendlela efanayo safumana abahlobo bethu. Sifuna ukuba uzive usekhaya kwaye siya kwenza konke okusemandleni ethu ukwenza ukuhlala kwakho kungalibaleki.
Ekungeneni ndiya kuba kwindawo yokuhlala ukuze ndinamkele, ukubonelela ngezitshixo kunye nolwazi oluninzi malunga nesixeko kunye nefulethi.
Kwiflethi unolwazi oluninzi olongezelelweyo malunga neLisbon.
Ngexesha lokuhlala kwakho ungasoloko unxibelelana nam. Ndiya kukuvuyela ukukunceda ngayo nayiphi na indlela endinokuyenza ngayo.
Sithanda ukwamkela iindwendwe zethu ngendlela efanayo safumana abahlobo bethu. Sifuna ukuba uzive usekhaya kwaye siya kwenza konke okusemandleni ethu ukwe…
Inombolo yomthetho: 32569/AL
Iilwimi: English, Français, Polski, Português, Español
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-R5378